Unashamed Australia Vidiyo — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Waxaan u helay in ay waqti la qaataan Mu'miniinta ka dal oo kala duwan, la dhaqan kala duwan, ka soo jeeda kala duwan oo jecel Ciise isla aannu ku samayn lahayn. Mid ka mid ah farxadaha ee dalalka kala duwan ka socda la waaniyey qorshaha Ilaah ee “furasho nafsaddiisa u bixinayo dad ka yimid quruun kasta.” Ilaah waa shaqada, ma ahan oo keliya halkan, laakiin dunida oo dhan, badbaadinta dadka waawayn iyo iyaga oo isticmaalaya waayo ammaantiisa.
Waxaan kaloo bartay in Aussies hadli cajiib ah. Waxay wac basbaaska “kaabsikam” oo waxay soo wici suufka “tuwaalada.” Waa maxay!? Waxay qabaa inaan sidoo kale in kastoo la hadasho… All nacasiin ah ayaa la ruxid jiinis caato oo ay eryi badan oo baabuurta Ghadafi. Qaar ka mid ah ardayda u maleeyay Thi'sl ahaa Biggie (iyagu ma ay ogayn inuu dhintay!) oo waxay u maleeyeen waxaan ahaa Bow Wow (waqtigeyga aan fiicnaa). Si kor loogu talagalay in qaar ka mid ah ciidammada bixiyey qaar ka mid ah BBQ Australiyaanka delicious, wan, digaag, iyo xataa qaar ka mid ah kangaroo. Waxa ay ahayd wax fiican!
This'l cunista qaarkood BBQ Kangaroo
Waa maxay sababta aan Waxaa Jeceshahay
Mid ka mid ah waxyaabaha muuqda ee aan joogay Australia waxaa qaadan si ay u bilaaban walaalahay la. wehelnimada wuxuu ahaa taajir, xiriirka ayaa sii dheeraysay, oo waxaa la ii dhisna by sheekaysiga cibaado leh. Waxaan xusuustaa karo wada hadalka wanaagsan oo ku saabsan guurka, wasaaradda, aabanimada, music, iwm. Ilaah wuxuu isticmaalaa sheekada sida kuwa si aad ii on Xoola in camalka wanaagsan iyo in ka badan ee iga dhig sida isaga. Waxaan ka mahadcelinayaa in la la heesaa wada-u hawshoonaya,, DJ ee, iyo maareeyayaasha safar kaasoo si dhab ah u jeclaataa Ciise.
Ku mahadsan tahay in aad ka
Waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo wasaaradaha, kuwaas oo ka caawiyey aad u dhacaan, Junuudda kuwa tusay hoteelada fiican, iyo taageerayaasha in si riwaayada yimid. Ilaa waqti soo socda, waxaan kuu jeclahay Australiyaanka!